လာဇီယို - ဝီကီပီးဒီးယား
၁၇,၂၄၂ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၆၆၅၇ စတုရန်းမိုင်)
၃၄၀/km၂ (၈၉၀/sq mi)
ယူရို ၁၉၃ ဘီလီယံ (၂၀၁၇)
လာဇီယို ( UK: /ˈlætsioʊ/, US: /ˈlɑːtsioʊ/, အီတလီ: [ˈlattsjo] ; လက်တင်: Latium ) အီတလီ ၏ အုပ်ချုပ်ရေးဒေသ ၂၀တွင် တစ်ခုဖြစ်သည်။ နိုင်ငံ၏အလယ်ပိုင်းကျွန်းဆွယ် တွင်တည်ရှိပြီး ၎င်းတွင်နေထိုင်သူ ၅,၈၉၇,၆၃၅ ဦး ရှိသည်။ ၎င်းသည် အီတလီနိုင်ငံ၏လူဦးရေ အထူထပ်ဆုံး ( လောင်ဗာဒီ ပြီးနောက်နှင့် ကမ်ပါနီယာ ထက် အနည်းငယ်မျှသာရှေ့တွင်) နှင့် ဂျီဒီပီသည် တစ်နှစ်လျှင်ယူရို ၁၇၀ ဘီလီယံကျော် ရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းသည်နိုင်ငံ၏ ဒုတိယအကြီးဆုံးဒေသ စီးပွားရေး ဖြစ်သည်။ လာဇီယို၏မြို့တော်မှာ ရောမ ဖြစ်ပြီး အီတလီ၏ မြို့တော် နှင့်နိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံးမြို့လည်း ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ Aniene ချိုင့်၏ Panorama ။
လာဇီယို၏ ဧရိယာသည် ၁၇,၂၄၂ စတုရန်း ကီလိုမီတာ (၆,၆၅၇ စတုရန်းမိုင်) နှင့်နယ်နိမိတ်ရှိပါတယ်၊ မြောက်ဘက်တွင် တပ်စကန်နီ, အမ်ဗရီးယာ နှင့် အရှေ့ဘက်တွင် အဗရပ်ဇီ နှင့် မိုလီစီ အရှေ့ , တောင်ဘက်တွင် ကမ်ပါနီယာတို့နှင့်, အနောက်ဘက်တွင် တိုင်ရေနီးယန်းပင်လယ် တို့ဖြင့် နယ်နိမိတ်ချင်း ထိစပ်နေသည်။ အရှေ့ပိုင်းနှင့် တောင်ပိုင်းခရိုင်များရှိ တောင်တန်းဒေသများဖြင့် ဒေသဖြစ်သည့် အဓိကအားဖြင့်များပြားသည်။
လာဇီယို၏ ကမ်းခြေသည် သဲသောင်ပြင်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်ပြီး Circeo (၅၄၁ မီတာ) နှင့် Gaeta (၁၇၁ မီတာ) ၏ အဓိကကျသည့် နေရာများ ဖြစ်သည်။ လာဇီယို၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သော ပွန်တီနစ်ကျွန်းများသည် တောင်ဘက် ကမ်းရိုးတန်းနားတွင် တည်ရှိသည်။ ကမ်းရိုးတန်း အနှံ့ အနောက်ဘက်တွင် Maremma Laziale (Tuscan Maremma ၏အဆက်) သည် Civitavecchia တွင် Tolfa တောင်တန်းများ (၆၁၆ မီတာ) ဖြင့်ပြတ်တောက်နေသောကမ်းရိုးတန်းလွင်ပြင်ဖြစ်သည်။ ဒေသ၏အလယ်ပိုင်းကိုရောမမြို့၏ပတ် ၀ န်းကျင် ၂,၁၀၀ စတုရန်း ကီလိုမီတာ (၈၁၁ စတုရန်းမိုင်) ခန့်ရှိသော ရောမကမ်မဂနီနီယမ် သည် ရောမ မြို့ပတ်ဝန်းကျင်ကျယ်ပြန့်သော alluvial လွင်ပြင်တွင် သိမ်းပိုက်ထားသည်။ တောင်ပိုင်းခရိုင်များမှာ ရာစုနှစ်များ တစ်လျှောက်ပြန်လည်ကောင်းမွန်အောင် ဖော်ထုတ် လုပ်ခဲ့ဖူးသော ယခင်ကရွှံ့နွံများနှင့်ငှက်ဖျား ငှက်ဖျား ဒေသဖြစ်သော Agro Pontino Agro Pontino ၏ ကုန်းမြင့်ဒေသများ ဖြစ်သည်။
Liberum ၏ Preapennines, တိုင်းဗားမြစ် ချိုင့်ဝှမ်းနှင့် Sacco မြစ်လက်တက်နှင့် Liri အားဖြင့်မှတ်သား, တိုင်းဗားမြစ် ၏ ညာဘက်အပေါ်မီးတောင် ဇာစ်မြစ်တောင်အုပ်စုသုံးခု: ဗိုစီနီ, စီမီနီ နှင့် Sabatini, အဘယ်သူ၏အကြီးဆုံးယခင် craterers Bolsena အားဖြင့် သိမ်းပိုက်ကြသည်, Vico နှင့် Bracciano ရေကန်။ တိဗက်၏တောင်ဘက်တွင်အခြား တောင်တန်းများသည် Preapennines ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ မီးတောင်မှ Alban Hills နှင့် calcareous Lepini, Ausoni နှင့် Aurunci တောင်တန်းများ ဖြစ်သည်။ Latium ၏ Apennines သည် Abruzzo ၏ Apennines ၏ဆက်နွယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ Terminillo နှင့် အတူ Reatini တောင်တန်းများ (၂,၂၁၃ မီတာ)၊ Sabini Mountsini, Prenestini, Simbruini နှင့် Ernici တို့သည် Liri အရှေ့ဘက်ရှိ Mainarde တောင်တန်းများ သို့ဆက်လက်တည်ရှိသည်။ အမြင့်ဆုံးတောင်သည် Abruzzo နှင့် နယ်စပ်ရှိ Gorzano တောင် (၂,၄၅၈ မီတာ) ဖြစ်သည်။
ရှေးခေတ်ရောမမြို့ နှင့်အီတလီတောင်ပိုင်းဒေသများသို့ဆက်သွယ်သောလမ်းဖြစ်သော အက်ပီး ယန်းလမ်း ( Via Appia ) သည်ယနေ့အချိန်အထိအသုံးဝင်ဆဲဖြစ်သည်။
အီတလီစကားလုံး လာဇီယိုသည် လက်တင်စကားလုံး Latium မှဆင်းသက်လာသည်။ ဒေသတွင်းမှာ၏အမည်ကိုလည်း၏ရှေးလူဦးရေ၏လူမျိုးစုသတ်မှတ်ရေးအတွက်ရှင်သန်နေဆဲ လက်တင် သူတို့ကိုဖွငျ့မိနျ့တျောလကျတင်ဘာသာစကားမှာ, Latini နှင့်မြို့-ပြည်နယ်မှအပေါ်လွန် ရှေးရောမမြို့ ။ ရှေးခေတ်ရောမတို့၏လူ ဦး ရေအချိုးအစားသည် လူမျိုးပေါင်းစုံ ရှိသော်လည်းဥပမာအားဖြင့်အီထရူးစန်နှင့်အခြား အီတလီလူမျိုးများသည် လက်တင်နီ မှလွဲ၍ အခြားအဓိကအင်အားစုများဖြစ်သည်။ ရောမဒဏ္ဍာရီတွင် လက်တင် အနွယ်များသည် လက်တင် ဘာသာစကားမှဆင်းသက်လာသည်။ Latium ရှိ ရွှေခေတ် အုပ်ချုပ်သူ Saturn သည်ထိုနေရာမှဂျူပီတာမှ (latuisset)  ဝှက်ထားသောနေရာအဖြစ်ရှေးဟောင်းများမှပေးထားသောဒဏ္ဍာရီဆန်သောလာဇီယိုမှလွဲ၍ အဓိကခေတ်သစ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မှာ လာဇီယိုသည်လက်တင် စကားမှဆင်းသက်လာခြင်း ဖြစ်သည် "ကျယ်ပြန့်" သောအဓိပ္ပာယ်ရှိသော "latus"  သည် "ကုန်းမြေ" ၏ အဓိပ္ပာယ်ကို ဖော်ပြသော ရောမကမ်ပါနီယာ ဟူသော စကားလုံးဖြစ်သည်။ လာဇီယို အများစုဟာ တကယ်တော့ပြားနေတယ်။ မူလလက်တီနီယမ် တို့နေထိုင်ခဲ့သောမြေများသည် Samnites များ ၊ Marsi ၊ Hernici ၊ Aequi ၊ Aurunci နှင့် Volsci တို့၏ပတ် ၀ န်းကျင်နယ်မြေများအထိတိုးချဲ့ခဲ့သည်။ ထိုပိုကြီးမားသည့်နယ်မြေကို Latium ဟုခေါ်ဝေါ်ကြသော်လည်း၎င်းကို Latium adiectum သို့မဟုတ် Latium Novum၊ ထပ်ပေါင်းထားသောမြေများသို့မဟုတ်နယူးလက်တီယမ်နှင့် Latium Vetus သို့မဟုတ် Old Latium, ယခင်နှင့်ပိုသေးသောဒေသအဖြစ်သို့ခွဲခြားထားသည်။
Lazio ၏ မြောက်ဘက်ပိုင်းနယ်နိမိတ်မှာ တိုင်းဗားမြစ် ဖြစ်ပြီး ၎င်းကို Etruria နှင့်ခွဲခဲ့သည်။
ဧကရာဇ်မင်း ဩဂုတ် တရားဝင်တစ်ခုတည်းပထဝီနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ entity သို့အားလုံးနီးပါးကျြမှောကျခတျေအီတလီနိုင်ငံစည်းလုံး Italia သည် တကျိပ်တပါးသောဒေသများသို့ခွဲဝေ။ အတူတူ၏ပစ္စုပ္ပန်ဒေသနှင့်အတူ - တောင်ဘက် Tiber မြစ်၏ယနေ့ဖွင့်လာဇီယို၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ် ရောမကမ်ပါနီယာ ချက်ချင်းလာဇီယို၏ အရှေ့တောင်ဘက်နှင့် များ၏ထိုင်ခုံမှ နျ - ခေတ်သစ်စဉ်, တိုင်းဒေသကြီးငါ (Latium et Campania) ဖြစ်လာခဲ့သည် အထက်ပိုင်းလာဇီယို Etruria - Regio VII ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်, နှင့်ယနေ့ Rieti ပြည်နယ် Regio IV - Samnium ပူးပေါင်းခဲ့သည်။
၅ ရာစု အကုန်တွင် အီတလီနိုင်ငံ ကို Gothic Conquest လုပ်ပြီးနောက်တွင် ခေတ်သစ် လာဇီယိုသည် Ostrogothic Kingdom ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။ သို့သော် Gothic War အပြီး ၅၃၅ နှင့် ၅၅၄ နှင့် Bizantine တို့သိမ်းပိုက်ပြီးနောက် ဤဒေသသည် လွတ်လပ်မှုကိုပြန်လည် ရရှိခဲ့သည်။ "Roman Duchy" သည် အရှေ့အင်ပါယာ ကရာဇ်မင်း၏ ပိုင်ဆိုင်မှု ဖြစ်လာသည်။။ သို့သော် Longobards ကို ဆန့်ကျင်သော ရှည်လျားသောစစ်ပွဲများသည် ဒေသအား အားနည်းစေခဲ့သည်။ ၇၂၈ ခုနှစ်တွင် ဆူရီ ကို လှူဒါန်းခြင်းဖြင့် ရောမဘိရှော့ပ်ကရောမ ဒူမှူး ထက်ကျော်လွန်၍ ပထမဆုံးနယ်မြေကို သိမ်းယူခဲ့သည်။
ဘာသာရေးနှင့် ဒေသန္တရမင်းမျိုးအနွယ်ဝင်တို့၏ အားဖြည့်မှုသည် ၁၆ ရာစုအလယ်ပိုင်းအထိ လောကီမင်းများ ( Baroni ) နှင့်ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးအကြား ပါဝါရုန်းကန်မှုများကို ဦးတည်စေခဲ့သည်။ Inocent III သည် Colonna မိသားစု၏ အင်အားကိုလျှော့ချရန် အတွက် ဘုရားရှိခိုးကျောင်းမှ ကိုယ်စားလှယ်များမှ တစ်ဆင့် Tuscia, Campagna နှင့် Marittima ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေး နယ်ပယ်များတွင် သူ၏အခွင့်အာဏာကိုလိုချင်သည်။ အခြား ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးလည်း အလားတူ လုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးသည် ပြင်သစ်နိုင်ငံ၊ အဗင်းနွန်တွင် နေထိုင်သောအချိန် (၁၃၀၉-၁၃၇၇) အတွင်း ရောမမှပုပ်ရဟန်းမင်းမရှိခြင်းကြောင့် ပဒေသရာဇ်မင်းများ၏ အာဏာသည်တိုးများ လာခဲ့သည်။ အသိုင်းအဝိုင်းငယ်များနှင့် အားလုံးအထက်တွင် ရောမတို့သည် မင်းများ၏ အာဏာကိုတိုးမြှင့်ခြင်းကို ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြပြီး ကိုလာဒရီ ယိုဇို နှင့်အတူ သူတို့သည် ဒေသနာ အာဏာ၏ ရန်သူများအဖြစ်တင်ပြရန် ကြိုးစားခဲ့သည်။ သို့သော် ၁၃၅၃ မှ ၁၃၆၇ အတွင်းတွင် ပုပ်ရဟန်းမင်းသည် လာဇီယိုနှင့်အခြား ပုပ်ရဟန်းမင်းပြည်နယ်များကို ပြန်လည် ရရှိခဲ့သည်။
၁၆ ရာစုအလယ်ပိုင်းမှစ၍ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးသည် ပုပ်ရဟန်းမင်းများပြည်နယ်များ နှင့် နိုင်ငံရေးအရ စည်းလုံးညီညွှတ်ရေးကို စည်းလုံးစေခဲ့သည် သို့မှသာ ဤနယ်မြေများသည် စိန့်ပီတာ၏ ပိုင်ဆိုင်မှု၏ ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးများ ဖြစ်လာသည်။ Viterbo ၊ Marittima နှင့် Campagna နှင့် Frosinone ရှိ အုပ်ချုပ်သူများက သူတို့ကို ပုပ်ရဟန်းမင်းအဖြစ် အုပ်ချုပ်သည်။
လာဇီယိုသည် သက်တမ်းတိုသော ရောမသမ္မတနိုင်ငံ ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ၎င်းသည် နပိုလီယံဘိုနာပါ့တ် ၏ အုပ်ချုပ်မှုအောက်ရှိ ပထမအကြိမ်ပြင်သစ်သမ္မတနိုင်ငံ၏ ရုပ်သေးပြည်နယ် ဖြစ်လာသည်။ ၁၇၉၈ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက်မှ ၁၇၉၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် လာဇီယိုကို ပုပ်ရဟန်းမင်းများ ပုပ်ရဟန်းမင်းတိတ် ပြည်နယ်များသို့ ပြန်ရောက်သည် အထိတည်ရှိသည်။ ၁၈၀၉ ခုနှစ်တွင်လာစီယာသည် တိဗက်ဌာန၏ အမည်ဖြင့် ပြင်သစ်အင်ပါယာသို့ ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ၁၈၁၅ ခုနှစ်တွင် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး လက်အောက်သို့ပြန်လည် ရောက်ရှိခဲ့သည်။
20 စက်တင်ဘာလ 1870 တွင် ရောမမြို့၏ဖမ်းယူခြင်း, ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး၏ နန်းစံစဉ်ကာလအတွင်း Pius IX, မှ ာပြင်သစ်ရဲ့ရှုံးနိမ့် Sedan, ပြီးစီးခဲ့ အီတလီပေါင်းစည်းရေး နှင့်လာဇီယိုဟာ သို့ထည့်သွင်းခဲ့သည် အီတလီ၏ဒမ်း ။
၁၉၂၇ ခုနှစ်တွင် Umbria နှင့် Abruzzo ပိုင် Rieti နယ်မြေသည် လာဇီယိုနှင့် ပူးပေါင်းခဲ့သည်။
၂၀၁၆ ဩဂုတ်လ ၂၄ ရက်နေ့တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော 2016 ၂၀၁၆ အလယ်ပိုင်း အီတလီအလယ်ပိုင်းငလျင်ကြောင့် လာဇီယို ရှိမြို့များ ပျက်စီးခဲ့သည်။ 
စိုက်ပျိုးရေး၊ လက်မှုပညာ၊ တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးနှင့်ရေလုပ်ငန်းသည် အဓိက ဝင်ငွေရလမ်းဖြစ်သည်။ စိုက်ပျိုးရေးကို စပျစ်သီးဝိုင်၊ သစ်သီး၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် သံလွင်သီးများ စိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့် သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည်။
လာဇီယို စက်မှုဇုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် ရောမတောင်ပိုင်းဒေသများ၌သာ ဖြစ်သည်။ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် အဓိကအားဖြင့် - ရောမတောင်ဘက် ကီလိုမီတာ အကွာအဝေး တွင်ရှိသော Cassa del Mezzogiorno နယ်နိမိတ်အနေအထားသည် အထူးသဖြင့် ရောမနှင့်အဝေးပြေးလမ်းမများနှင့် Autostrada del Sole (အဝေးပြေးကားလမ်း) အနီးရှိဒေသများကို အထူးသဖြင့် စက်မှုလုပ်ငန်းအနေအထားအပေါ် သက်ရောက်သည်။ Frosinone ဝန်းကျင်။ ကုမ္ပဏီများသည် အငယ်စားမှ အလတ်စားအရွယ်အစားရှိပြီး ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ (ရောမ၊ စီဗီတာဗက်ရှားယား)နှင့် ( ရောမ ၊ စီ ဗီတာဗတ်ရှားယား )၊ စက္ကူ ( Sora, Italy, Isola del Liri )၊ ရေနံဓာတုဗေဒ ( Gaeta, Rome )၊ အထည်အလိပ် ( Frosinone )၊ အင်ဂျင်နီယာ ( Rieti, Anagni ) တွင်မကြာခဏလုပ်ကိုင်ကြသည်။ ), မော်တော်ယာဉ် ( Cassino ), အီလက်ထရောနစ်နှင့်လျှပ်စစ် ( Viterbo ) ကဏ္ဍခွဲများ။
အလုပ်လုပ်သော လူဦးရေ၏ ၇၃ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သည်ဝန်ဆောင်မှု ကဏ္ဍတွင် အလုပ်လုပ်ကြသည်။ ၎င်းသည်အတော်အတန် အချိုးအစားရှိသော်လည်း အများပြည်သူအုပ်ချုပ်မှု၊ ဘဏ်လုပ်ငန်း၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ အာမခံလုပ်ငန်းနှင့်အခြားကဏ္ဍများ၏ အဓိကကျသော ရောမရှိခြင်းကြောင့် တရားမျှတသည်။ အများပြည်သူနှင့် ပုဂ္ဂလိကပိုင်နိုင်ငံပိုင်နှင့် နိုင်ငံစုံကော်ပိုရေးရှင်း အမြောက်အမြားသည် သူတို့၏ရုံးချုပ်ကို ရောမမြို့ ( ENI, Enel, Leonardo, Alitalia, RAI ) ရှိကြသည်။
လာဇီယို၏ အကန့်အသတ်ရှိသော စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် အဆင့်မြင့်သော ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများသည် ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင်ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး အကျပ်အတည်း၏ အလယ်ဗဟိုတွင်အီတလီဒေသ၏ စီးပွားရေးကို ကောင်းစွာ ကျော်လွန်နိုင်ခဲ့သည်။
၂၀၁၈. ခုနှစ်တွင် အလုပ်လက်မဲ့နှုန် ၁၁.၁% တွင် ရှိသည်။
(% တွင်) ၇.၅% ၆.၄% ၇.၅% ၈.၄% ၉.၂% ၈.၇% ၁၀.၆% ၁၂.၀% ၁၂.၅% ၁၁.၈% ၁၁.၁% ၁၀.၇% ၁၁.၁%
လူ ဦး ရေ ၅.၈၈၇ သန်းရှိပြီးလာဇီယိုသည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်အကုန်တွင် အီတလီ၏လူ ဦး ရေအထူထပ်ဆုံးဒေသဖြစ်သည်။ ဒေသတွင်း၌ အလုံးစုံလူဦးရေသိပ်သည်းမှုကီလိုမီတာ2နှုန်း 341 မြို့သားတို့ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လူဦးရေသိပ်သည်းမှုကျယ်ပြန့်အလွန် urbanized အတွက် ကီလိုမီတာ2 နှုန်းနီးပါး 800 မြို့သားတို့ကနေ လာနေကြပါတယ် ရောမပြည်နယ် တောင်တန်းနှင့်ကျေးလက်များတွင် ကီလိုမီတာ2နှုန်းထက်နည်း 60 မြို့သားတို့ Rieti ၏ခရိုင် ။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတွင် အီတလီအမျိုးသား ISTAT စာရင်းအင်းအဖွဲ့က ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုအရနိုင်ငံခြားဖွား ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ ၄၉၇,၉၄၀ သည် လာဇီယိုတွင် နေထိုင်ပြီးစုစုပေါင်း ဒေသလူ ဦး ရေ၏ ၈.၈% နှင့်ညီမျှသည်။
ရောမသည် အစဉ်အလာအားဖြင့် နိုင်ငံရေးအရအလယ်ဗဟိုတွင် ရှိနေပြီးကျန် လာဇီယို၏ ကျန်မှာအလယ်ဗဟိုမှ ဖြစ်သည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ တွင် လာဇီယိုသည် မဲများ၏ ၄၄.၂% ကို ဗဟိုညာဘက်ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့သို့ပေးခဲ့ပြီး ဗဟို - ဘယ်ဘက်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုမှာ ၄၁.၄% ရရှိခဲ့သည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ တွင် လာဇီယိုသည်မဲအရေအတွက် ၄၀.၇% ကို အလယ် - လက်ဝဲဘက်ရှိ ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့များ၊ ၂၉.၃% ကို အလယ်ဗဟို - ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့နှင့် ၂၀.၂ - ကြယ်ငါးပွင့်လှုပ်ရှားမှု အဖွဲ့သို့ ပေးခဲ့သည်။
လာစီယိုကို ပြည်နယ် ၄ ခုနှင့် မြို့တော် တစ်ခု (ပြည်နယ်အဆင့်)မြို့ အဖြစ်ခွဲထားသည်။
ပြည်နယ် (ဧရိယာ (ကီလိုမီတာ၂ ) လူ ဦး ရေ သိပ်သည်းဆ
(နေထိုင်သူ / ကီလိုမီတာ2)
ဖရိုစီနို၏ပြည်နယ် 3,244 496,545 ၁၅၃.၁
လက်တီနာပြည်နယ် 2,251 543.844 ၂၄၁.၄
ရီတီပြည်နယ် 2,749 158,545 ၅၇.၇
မြို့တော်ရောမမြို့တော် 5,352 4,097,085 765.5
Viterbo ၏ပြည်နယ် ၃,612 314,690 ၈၇.၁
↑ ၁.၀ ၁.၁ "တစ်ဦးချင်းဒေသဆိုင်ရာဂျီဒီပီသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ၃၁% မှ ၆၂၆% အထိရှိသည်" (သတင်းထုတ်ပြန်ချက်)။ ec.europa.eu။2September 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ latin | Origin and meaning of the name latin by Online Etymology Dictionary။
↑ Powerful Earthquakes in Italy.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=လာဇီယို&oldid=703107" မှ ရယူရန်
အီတလီဘာသာစကား ပါဝင်သော ဆောင်းပါးများ
ဤစာမျက်နှာကို ၆ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၄:၄၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။